Nbudata MP4 Player 3.31.3 – Vessoft
WindowsMultimediaNdị mgbasa oziMP4 Player
Udi: Ndị mgbasa ozi
Ibe akwukwọ: MP4 Player
MP4 Player – a software na-egwu na multimedia faịlụ na MP4, netu na WebM formats. MP4 Player-enye gị ohere na-ele video na elu mma, ịmepụta listi ọkpụkpọ na ịgbanwe size ma ọ bụ nghọta nke ọkpụkpọ. The software enyere ịgbanwe na mkpado ma ele a ọmụma zuru ezu banyere mgbasa ozi faịlụ. MP4 Player na-akwado ndị ndepụta okwu na e dere ọtụtụ ngwá ọrụ iji hazie. The software nwere mfe iji interface na-erepịakwa kacha nta usoro ego.
Akwado MP4, netu na WebM formats
Ọrụ na listi ọkpụkpọ
Low oriri nke usoro ego
Nbudata MP4 Player
Onye Ntinye Video Facebook – onye njikwa mara mma iji budata faịlụ vidiyo na Facebook na ọrụ ndị ọzọ a ma ama. Akụrụngwa ahụ na-enyere aka ịmegharị vidiyo ndị a n’ụdị ọdịyo dị iche iche ma wepụ egwu ọdịyo na faịlụ vidiyo.
Ihe Ntụgharị MP4 – удобный в использовании конвертер файлов для преобразования видео в различные медиа форматы. Ограмма поддерживает работу с большинством популярных медиа форматов и пакетную обработку файлов.
Comments na MP4 Player
The ngwá ọrụ ịchọ na-egwu music. The software-ahazi ihe music ọbá akwụkwọ na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịkekọrịta ha na ndị enyi.
A dị ike player na-enye ohere ka ị na na ọtụtụ ndị media formats na-eji dị iche iche audio nzacha na video mmetụta.
iTunes – onye ọkpụkpọ ama ama iji weghachite faịlụ mgbasa ozi. Akụrụngwa na-akwado mmekọrịta data n’etiti kọmputa gị na ngwaọrụ Apple.
MP3Gain – ngwanrọ iji bulie olu nke faịlụ MP3. Sọftụwia nwere sistemụ nyocha nke olu nke ọdịyo wee chọpụta oke ụda dị mma maka ịnụ mmadụ.
Mp3DirectCut – onye nhazi ọdịyo dị mfe iji rụọ ọrụ na MP3-file. Akụrụngwa ahụ gụnyere ngwaọrụ iji mpikota egwu ọdịyo na enweghị funahụ.
The software agafeta media faịlụ n’etiti gị na kọmputa na iOS ngwaọrụ. The software nwere a set ngwaọrụ jikwaa egwu na video faịlụ.
HitmanPro – ngwá ọrụ dị mma iji chọpụta ma wepu ihe ojoo site na iji nyocha omume na teknụzụ igwe ojii.
Homedale – ihe eji eme ihe iji nyochaa isi ihe ikuku na – abanye ma mee ihe ụfọdụ iji dozie akara ndị adịghị ike site na ebe Wi-Fi ma ọ bụ WLAN.
FBReader – ngwanu iji guo eBooks na usoro di iche. A na-akwado ntụgharị doro anya nke tebụl, ihe oyiyi, eserese na ndetu na ederede.